B2B Content Marketing Statistics ho an'ny 2021
Zoma, Martsa 18, 2022 Zoma, Martsa 18, 2022 Douglas Karr
Elite Content Marketer dia namolavola lahatsoratra feno momba ny Content Marketing Stats izay tokony ho levon'ny orinasa rehetra. Tsy misy mpanjifa tsy ampidirinay ho ampahany amin'ny paikady ara-barotra ankapobeny. Ny zava-misy dia ny mpividy, indrindra ny mpividy business-to-business (B2B), dia mikaroka olana, vahaolana ary mpanome vahaolana. Ny tranombokin'ny atiny izay novolavolainao dia tokony hampiasaina hanomezana ny antsipiriany rehetra ilaina mba hanomezana azy ireo valiny ihany koa
Inona ny atao hoe Marketing Marketing?
Zoma, Martsa 11, 2022 Zoma, Martsa 11, 2022 Douglas Karr
Na dia nanoratra momba ny fivarotana votoaty nandritra ny folo taona mahery aza izahay, dia heveriko fa zava-dehibe ny mamaly fanontaniana fototra ho an'ny mpianatra amin'ny varotra ary koa manamarina ny fampahalalana omena ireo mpivarotra efa za-draharaha. Ny marketing votoaty dia teny midadasika izay mandrakotra tany an-taonina. Ny teny hoe marketing votoaty mihitsy no lasa mahazatra amin'ny vanim-potoana nomerika… Tsy tadidiko ny fotoana tsy nahitana votoaty mifandraika amin'izany ny marketing. ny
Dingana 10 hitantanana ny fifandraisana amin'ny krizy
Alatsinainy, Septambra 21, 2020 Talata, Septambra 22, 2020 Jenn Lisak Golding
Efa mba niatrika krizy mifandraika amin'ny orinasanao ve ianao? Eny, tsy irery ianao. Ny fifandraisana amin'ny krizy dia mety lehibe - manomboka amin'ny valiny mihemotra momba izay holazainao amin'ireo fiantsoana ara-tsosialy rehetra tonga mba hamaritana raha tena krizy na tsia. Fa ao anatin'ny korontana dia zava-dehibe hatrany ny fananana drafitra. Niara-niasa tamin'ny mpanohana ny sehatra fanaraha-maso izahay
Ny torolàlana farany hananganana ny paikadim-barotra nomerika
Alatsinainy, Jolay 29, 2019 Alatsinainy, Jolay 29, 2019 Roman Kumar Vias
Vitsy dia vitsy no mino fa ny paikady marketing mahomby dia mety hampihena ny vidin'ny fampielezan-kevitra hatramin'ny 70%. Ary tsy voatery mila mampiditra matihanina izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao ny fomba fanaovana fikarohana amin'ny tsena samirery, diniho ny mpifaninana aminao ary fantaro izay tena tadiavin'ny mpihaino. Ny paikady marani-tsaina dia mety hampihena ny vidin'ny marketing amin'ny 5 tapitrisa dolara ka hatramin'ny 1-2 tapitrisa. Tsy nofinofy ity, fa ity no efa ela hatrizay
Maninona izahay no tsy manery amin'ny famoahana ny serivisy fizarana intsony
Alarobia 16, 2017 Alarobia 16, 2017 Douglas Karr
Nanaitra anay ny iray tamin'ireo mpanjifanay androany, nampahafantarin'izy ireo izahay fa nanao sonia ny serivisy fanelezana gazety an-tsokosoko natolotry ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminy izy ireo ahafahan'izy ireo mizara ny fampahalalam-baovao ataon'izy ireo amin'ny tranokala 500 mahery. Nitaraina avy hatrany aho… izao no antony: Ny serivisy fizarana gazety famoahana gazety dia tsy manome laharana ny atiny ampirisihinao mihitsy, koa raha tsy hoe mihaino am-pahavitrihana ny famoahana gazety manokana ny olona iray dia matetika dia tsy hita velively amin'ny valin'ny fikarohana izy ireo. Tsindrio ny fizarana gazety